Ogaden News Agency (ONA) – Mamulka Jaliyada Ogadenya ee Minnesota oo shir muhiim ah isugu yimid..Maxaa ka so baxay?
Mamulka Jaliyada Ogadenya ee Minnesota oo shir muhiim ah isugu yimid..Maxaa ka so baxay?
Maanta oo ay taariikhdu ahayd 10-26-2013 ayaa waxaa shir 4 billood la ah isugu yimid maamulka jaaliyada gobolka minneasota ee dalka maraykanka, shirkan oo sanadkii la qabto sadex jeer, iyada oo bill walba shir maamul iyo midka xubnuhuba qabsoomaan si joogtaha, ayaa shirkan aallaaba xooga lagu saaraa qiimaynta hawlaha jaaliyadka guud, gaar ahaan tan wadanka maraykanka iyo gobolka minneasotaba.
Shirkan oo ahaa kii maamullakan hada xillaka haya ugu horeeeyay ayaa waxaa sidii mamulka caadada u ahayd lagu furay, Aayado Qur’aan ah oo uu soo jeediyay hogaanka arimaha diinta ee jaaliyada, Sheikh Abdifatax Xassan Arab, oo Qur’aanka kadib xoogaa wacdi ah raacsaday.
Kadibna waxaa hadalka kusoo dhawaaday Gudoomiyaha Guud Ee Gobolka, MN Mudane Abdinassir Hirsi Ahmed ( Gaani) oo si qodo dheer oo faahfaahsan uga warbixiyay hawlihii ay soo qabteen in tay xillka hayeen oo ahay 4 billood, isgoo bill kasta afarteed todobaada wax qabadkii jaaliyada guud ee gobolka soo bandhigay, islamarkaana dulmar ku sameeyay xaalada guud ee halganka jwxo hormuudka katahay iyo hawllaha la fillayo in jaaliyadu fulliso 4 billood ee fooda inagu soo haysa.
maamulkan oo runtii 4 billood ee ay xillka hayeen ka soo dhalaalay hawlo badan oo muhiim ah wax qabad muuqdana sameeyay oo dhamaan qorshayaashii uyaalay u fulliyay sidii loogu talagalay, ayaa waxay billaabeen ka doodista qorshayaasha afarta billood ee fooda inagu soo haysa oo ay isla qaateen in la dardargaliyo dhamaan hawlaha halganka, in xooga la saaro arimaha xuquuqul insaanka, oo dhibaatada shacabka aan waxba galabsan ee reer ogadenia lagu hayo caalamka loo soo bandhigo iyadoo arintaa shir heer caalami ah in loo qabto bisha danbe dhaxdeeda la isla qaatay.
a href=”http://www.ogadennet.com/?attachment_id=26878″ rel=”attachment wp-att-26878″>
waxaa kaloo la isla qaatay wacyi-galinta bulshada somalida ogadenia iyo tan jamhuuriyada Somaliaba in looga digo beenta iyo borobagaandada indho saraxaadka ah ee cadawga been quutaha ah usoo dhoofiyo qurbaha waayadan danbe markii ay ku fashilmeen in shacabka gudaha ogadenia jooga ay ka dhaadhiciyaan beenta aan salka iyo raadka lahayn iyadoo uu caalamku ogyahay wax dhabta ah ee ogadenia ka jiro.
Maamulkan wuxuu muhiimadiisa labaad siiyay wacyigalinta bulshadaas aan kor ku soo sheegnay. Waxaa kaloo maamulku ansixiyay in uu si dhakhsa ah ogaden TV oo nidaamka tiknoolajiyada casriga ah ee intarneetka loo isticmaalayo hawada usoo galo oo si maqal iyo muuqaal ah looga haqab beeli-doono inshaa ALLAH billahan soo socda.
Waxaa kaloo la isla qaatay in xubnaha jaaliyada la tayeeyo oo aqoontooda xaga halganka kor loo qaado islamarkaana gudi arintaa ka shaqaysa loo xullay oo billaabi doonta bixinta siminaaro kuwaasoo ku soo wareegi doona dhamaan dagmooyin gobolkan minneasota.
Shirkan oo ahaa shir heer sare ah ayaa hogaamadu mid mid qorshayaasha ugu danbayntii u kala qaateen iyadoo kuwii hore fullintoodiina la isku abaal mariyay aadna la isugu dhiiri galiyay la isuna rajeeyay in hogaan walaba shaqada hortaala illaahay ufududeeyo.
Shirkana waxaa gunaanadkii lagu soo xidhay aayado Qur’aan ah.